Ugaaso Shaacuur: “Waa dabkii afaraad oo ay hanti iiga gubaneyso” | Radio Himilo
Home / Dhaqaale / Ugaaso Shaacuur: “Waa dabkii afaraad oo ay hanti iiga gubaneyso”
Posted by: Sadia Nour May 22, 2022
Himilo – Ugaaso Gees-dheer Shaacuur waxey ka mid tahay ganacsatadii ku hanti beeshay dabkii habeenimadii Jimcaha qabsaday xarumaha ganacsi ee ku teedsan waddada xiriirisa isgoyska Banaadir iyo isbitaalka Digfeer.
Dabkan oo ka billawday qalqal koronto ayaa baabi’iyay in ka badan labaatan dukaan oo isugu jira kuwa lagu iibiyo waxyaabaha lagu qurxiyo, bacadlayaal dhar, bakhaaro, dukaamo raashin iyo kuwa kale.
“Waa dabkii afaraad oo ay hanti iiga gubaneyso, bakaaro ayey seddax jeer iiga soo gubatay,” ayey tiri Ugaaso Gees-dheer Shaacuur oo goob ganacsi ku lahayd suuqa Banaadir ee mashaqadu qabsatay.
Iyada oo la hadleysay BBC-da laanteeda Af-Soomaaliga ayay sheegtay in ganacsigeeda oo ka billawday daaqad baati ah oo ay ku dhiibto hab hey-wareerin ah ay ka korisay waxna ka bartay carruur agoon ah oo uu dhalay walaalkeed iyo kuweed oo seddax sano kahor uu geeriyooday aabahood.
“Waxaan arkayay iyada oo loo gurmanayo ganacsatada Boosaaso, Hargeysa illaa Jibuuti, annaga haddii aan nahay ganacsatada Muqdisho weli ma arag wax innoo gurmada” ayey sii raacisay Ugaaso Gees-dheer.
Dabka oo si dhaqsi leh ku fidiyay, dukaamada oo ahaa kuwa dacalka isku haya, iyo gawaarida dab damiska oo aan goobta ka dhaweyn, waxey sababeen in badi hantidii taalay xarumahaasi ganacsi uu dabku dhulka ku daro.
Seddax Maalin kaddib, lama oga inta uu la’eg yahay khasaaraha maaliyeeyadeed ee rasmiga ah ee ka dhashay dabkii ka kacay suuqa Banaadir, marka laga reebo qiyaasta Rugta Ganacsiga soomaaliyeed ee ku dhaw 30-ka milyan ee doolar.
Inta badan ganacsatada wax ku iibiya suuqyada Muqdisho kuma jiraan wax ceymis ah, taasina waxey ku qasabtaa in ay raadiyaan dayn si ay dib ugu billaabaan ganacsigoodii uu dabku baabi’iyay.
Previous: La kulan – Aabbe labaatan sano waddooyinka Muqdisho la taagan barkimo
Next: Taariikhihii laga diiwaangeliyay Premier League 2021/2022